» उद्योगीलाई सस्तोमा बिजुली दिए धेरै कमाउँछ भन्ने जस्ता मानसिकता कहिले फाल्ने ?
२०७८ मंसिर १३, सोमबार १२:४१
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा सन् २००४ मा व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, अहिले व्यापार घाटा रकेटजस्तै बढेर १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यति हुँदाहँुदै पनि चालु आर्थिक बर्षको साउनभन्दा अघि नेपाललाई शोधनान्तर अवस्था (भुक्तानी सन्तुलन) मा कुनै समस्या थिएन । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले शोधानान्तर स्थिति सन्तुुलनमा राख्न सहयोग गरेको थियो । तर, साउनयता रेमिट्यान्स घट्दा व्यापार घाटामा चाप परेको छ । व्यापार घाटा बढ्दा शोधनान्तर स्थिति पनि ३८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । शोधानान्तर घाटा हुुँदा स्वभाविक रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्ने नै भयो । यद्यपि अहिले पनि मुलुकसँग झन्डै एक वर्षको वस्तु आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसबाट अझै पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वस्थकर अवस्थामै छ भन्न हिच्किचाउनुु पर्दैन ।
हुन त खनिज पदार्थका खानी छ भनेर हल्ला नगरिएको होइन । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका खानीको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । उदाहरण दिऔँ– जस्तो युरेनियम छ भनिन्छ तर त्यो छ वा छैन, उत्खनन र प्रशोधन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन त ? यसैमा अल्मलिएका छौँ । छ भने खोइ त उत्खनन गर्न सुरु गरेको ? छ भने उत्खनन गर्नेतिर लागौँ न, त्यसपछि प्रशोधनका काम अघि बढाऔँ । सम्भव हुनेजति खनिजको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरौँ । त्यसपछि निर्यातको विषय अघि बढ्ला । ‘एक्सन’मा नगएसम्म ‘मुखको बोली’का भरमा गरिने अनुमानको के अर्थ ? व्यवहारमा काम अघि बढ्न नसक्दा नेपाली उद्योगहरूले विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरिरहने परम्परा कायमै रहनेछ र त्यसको विकल्प पनि हुने छैन ।
नेपालले अब दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । अरू–अरू देशमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएड) गर्ने उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरिन्छ । चीन र भारतमा भ्यालुएड गर्ने र रोजगारी धेरै सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत नै दिइन्छ ।
त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारको चाहना के हो ? स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सरकार/प्राधिकरणले नाफा मात्रै चाहने हो वा देश विकास पनि चाहने हो ? देशको व्यापारघाटा कम गर्ने, देशलाई समृद्धितिर अघि बढाउने हो वा होइन, त्यसमा सरकार नै प्रस्ट हुन जरुरी छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ छैन, नेपालको भौगोलिक कारणले नै ‘सिपिङ कस्ट’ बढी छ । यी बेफाइदाहरूबीच नेपालले वस्तु उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा फाइदा लिन सक्ने भनेको विद्युत् हुनसक्छ । यसलाई सरकारले आफ्नो नीतिमै राख्नुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादनसँग जोडिएर लगानीकर्ताहरूको सम्मान पनि आउँछ । लगानी गर्नेले निश्चय पनि केही नाफा खोज्छ । राज्यको कानुनअनुसार लगानी गरेर कमाएको नाफालाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यसले समग्रतामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले महासंघले ‘सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल’को नारा अघि सारेको छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न सकिँदैन र उनीहरूले गर्ने नाफालाई सम्मान गर्न सकिँदैन तबसम्म लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि रोजगारी सिर्जना हुने र नाफा गर्ने कुरै आउँदैन । असन्तुलित वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम कहीँकसैले गर्नु हुँदैन । त्यसो भनेर गलत अभ्यासहरूमा राज्य मूकदर्शक भएर बस्नुुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले यावत् पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालले वस्तु उत्पादन बढाउन सक्छ र नेपालको दीर्घकालीन निर्यातको अवधारणा अघि बढ्न सहयोग मिल्छ ।
नेपालको व्यापार हिस्सा ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग नै बढी देखिन्छ । भारत र चीन विश्व बजारमा दरिलोसँग उभिइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालले दुवै मुुलुुकसँग सहकार्य गरेर फाइदा लिनैपर्ने हुन्छ । नेपालले दुवै मुलकबाट वस्तु व्यापारमा फाइदा लिने हो भने आफ्ना उत्पादन (प्रोडक्ट) हरू निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले मुख्य उत्पादन निर्यात गर्न गाह्रो छ किनकि उनीहरू नै मास (धेरै) उत्पादन गर्छन् । यस्तो स्थितिमा हाम्रो उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नेपालले उनीहरूलाई कुनै सेवामूलक उद्योगमा आकर्षित गर्नसक्छ । पर्यटनमा धेरै सम्भावना छ । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षाको ‘हब’का रूपमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
महासंघले व्यवसायका मूलभूत समस्या केलाएर समाधानको उपाय राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत सुझाएको छ । त्यसमा १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्र र सय पहल समावेश छन् । महासंघ आफैं कार्यान्वयन निकाय नभएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । धेरै हदसम्म सरकार सहमत पनि छ । राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको योजना कार्यान्वयन हुन सके सन् २०३० मा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब डलर नाघ्नेछ । त्यस्तै २२ लाख व्यक्तिले औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेछन् भने व्यापार घाटा र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात आधा घटाउन सकिनेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।